အနုပညာဗီလာ Orlova Chuka အဘိဓါန် - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း - အဆင်းလှသောသဘာဝ Park မှာတည်းခိုခန်း
အနုပညာဗီလာ Orlova Chuka အဘိဓါန်
လှပတဲ့ Rusenski Lom သဘာဝ Park မှာတည်ရှိပါတယ်ဧည့်အိမ်,
အဆိုပါအိမ်သည်သင်သဘာဝတရားနှင့်သင်၏အတွင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်မှပိုနီးစပ်ရနေရာဖြစ်ပါသည်။ဒါဟာအင်တာနက် access ကိုနှင့်ရှားပါးဆဲလ်ဖုန်းလွှမ်းခြုံခြင်းမရှိနှင့်အတူတစ်ဦးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အိမ်သူအိမ်သားမြို့ရိုးပေါ်မှာကြယ်၎င်း၏တံခါးဝမှဦးဆောင်နေတဲ့ရောမ cobblestone ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်မြေခွေးနှင့်သမင်၏သီချင်းနားထောင်နေစဉ်အမျိုး, သင်နှင့်နဂါးငွေ့တန်းနှင့်အတူအထက်ကြည်လင်သောမိုးကောင်းကင်ထဲမှာမရေမတွက်နိုင်သောကြယ်များကိုခံစားနိုင်, ယင်းမှအပဲ့တင်သံနှင့်အတူလာမယ့် ချောက်။
Ivelin Vlaykov တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ပန်းချီဆရာ။ ယခုအချိန်တွင်သူကော်ပိုရိတ်အိုင်တီကုမ္ပဏီများအတွက်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံဒီဇိုင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ သူ့အိပ်မက်အောင်မြင်ရန်ဖို့ကြိုးစားနေသောသူသည်သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး။ သူ့ရဲ့ကလေးဘဝထိုကျောက်-သစ်သားအိမ်သူအိမ်သားများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရိုင်းသဘာဝလွန်။ ဤတွင်သူသည်မိမိအဘက်ထရီ recharges ။
ကျွန်မရဲ့မိသားစုအနုပညာဗီလာ Orlova Chuka အဘိဓါန်စီမံကိန်းကိုတစ်နေရာရာမှာအဘယ်သူမျှမဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အများဆုံးအမည်မသိသောအရပ်တို့ကိုမတ၏စကားကိုကြားရသော Pepelina လို့ခေါ်တဲ့ရွာ၌ 1912 န်းကျင်ကနေဒီသာမန်အိမ်သူအိမ်သားရှိခြင်းစတင်ခဲ့ပြီးနိုင်။ မယုံကြည်ခဲ့ဘူး ဒါပေမယ့်ငါ့အဘို့ကံကောင်းငါစစ်မှန်တဲ့လာမယ့်ဧည့်သည်အိမ်သူအိမ်သားများနှင့်အနုပညာစင်တာအတွက်ဒီစိတ်ကူးစေရန်သူတို့၏အပြည့်အဝထောက်ခံမှုရတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီနည်းနည်းစိတ္တဇစမ်းသပ်မှုအစစ်အမှန်ဖြစ်လာသည်နှင့်အဟုတ်ကဲ့ - သူတို့ကကြိုက်တယ်။ ကျနော်တို့တဖြည်းဖြည်း, restore ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့်, ငါသည်အစဉ်အဆက်လာရန်နှင့်လူတို့နှင့်အတူမျှဝေဖို့အတှကျအသကျရှငျနေချင်သောကြောင့်, သင်တန်း၏, ငါအစုလိုက်အပြုံလိုက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကြောင့်တန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်သူကလူများအတွက်တစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာရှာကြံ, ဤအဖိုးတန်ရာအရပျကိုအလှဆင်ခြင်း, ထိုအကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်များနှင့်မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြသည်။
100 ကျော်မီတာမြင့်သော, အိမ်ကနေ 10 မိနစ်လမ်းလျှောက်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးထားတဲ့ - ငါချောက်ကြည့်ရှုကျော်ပထမစောင်းသွားရောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်များမှအကြံပြုပါသည်။ ထို့နောက်သူတို့လမ်းလျှောက်ဆက်လက်နိုင်ပြီးဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ဒုတိယအရှည်ဆုံးဂူရောက်ရှိလိမ့်မည် - Orlova Chuka အဘိဓါန်ဂူ, Meadows, သစ်တောများနှင့် Cherni Lom မြစ် overhanging မြင့်မားကမ်းပါးနှင့်အတူရိုင်းဇာတိအားဖြင့်ဝိုင်းရံ။ သူတို့နောက်ထပ်ဆင်းလမ်းလျှောက်ဖို့ဝံ့လျှင်, သူတို့သည်ကျောက်တို့မှထွက်လာမယ့်, အ tastiest ရေသည်တဦးနှင့်အတူအနည်းငယ်နွေဦးကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် - ငါ Belonoga နွေဦး (အဖြူရောင်-အတော်များများကမျက်စိနွေဦး) ကိုခေါ်ထားတဲ့ Urun Bunar, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်များစွာသောရိုင်းတိရစ္ဆာန်အပုဒ်၏ ။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို Rusenski Lom သဘာဝ Park နှင့် Natura2000 ရိုင်းသောငှက်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, သငျသညျသည်းခံခြင်းရှိသည်ဆိုပါက, သင်သည်ထိုသူတို့အချို့ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Pepelina ရွာ၌လမ်းလျှောက်ခံစားယဇ်ပုရောဟိတ်မပါဘဲ, ဒါပေမယ့်အရှိဆုံးထူးခြားတဲ့ icon များထဲကတစ်ခုနှင့်အတူအသင်းတော်၏အရာအဆင့်ဆင့်ဟာ belfry, အပြောက်ဂူ၏ဒဏ္ဍာရီတောင်း - St.Virgin မာရိသညျ Mlekopitatelnitsa ။ ကားဖြင့်ဆက်လက်, မြစ်အောက်ပါ, သင် Cherven ၏အလယ်ခေတ်မြို့, အ Ivanovo ရော့ခ်ချာ့ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်, ကမ္ဘာအမွေအနှစ်များ, အ Basarbovo ရော့ခ်ကျောင်းတိုက် '' စိန့်အဖြစ်ယူနက်စကိုကအသိအမှတ်ပြု Dimitar Basarbovski "။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆိုဒ်အမျိုးသမီးကျောင်းတိုက် '' စိန့် Marina ဆိုတဲ့ '' က, Karan Varbovka ရွာ၌တည်ရှိသော၎င်း၏ဒဏ္ဍာရီသည်အနာပျောက်စေသောနွေဦးအဘို့အကျော်ကြားဖြစ်ပါသည်, ငါဒဏ္ဍာရီအဘို့အမေးရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ အဲဒီမှာအနည်းငယ်ပိုပြီးအထူးလျှို့ဝှက်သောနေရာများနှင့်ဒဏ္ဍာရီများမှာ, ဒါကြောင့်သင် Adventures ဘို့အချိန်ပိုမိုစိတ်ဝိညာဉ်ရှိပါကသင်ကြည့်ရှုခြင်းငှါလာကြသောအခါငါလူတစ်ဦး၌သင်တို့နှင့်အတူသူတို့ကိုမျှဝေပေးပါလိမ့်မယ်။ သင်ကဤအရာအလုံးစုံသောနေရာများသို့သွားရောက်ယူပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ငါ့ကိုမမေးလျှင်, သင်အပြည့်အဝအတှေ့အကွုံခံစားရန်မှာအနည်းဆုံး5ရက်ပေါင်းနှမြောဖို့ရှိသည်။
ကျနော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူအညီဖြင့်နေဖြင့်ကင်ဆိုင်တွေစေရန်သင့်အားပူဇော်လော့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥယျာဉ်မှရာသီအလိုက်သုပ်နှင့်အသီးအပွရှိပါသည်။ သငျသညျအိမ်မှာလုပ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများနှင့်စပျစ်ရည်ကိုမြည်းစမ်းနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နွေရာသီမီးဖိုချောင်, ပို့ရေးဌာန, ကျောက်စားပွဲနှင့်ကြိုးပုခက်သည်သင်၏စွန့်ပစ်ခြင်းမှာဖြစ်ကြောင်း, သို့မဟုတ်သင်ရိုးရှင်းစွာ3အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူကြီးမားသောခြံအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေရောင်ကိုခံစားခြင်းနှင့်တစ်ဦးစာအုပ်ဖတ်ပါ, ဒါမှမဟုတ်ရေးလိုက်, ဆေးထိုးခြင်းနှင့်အပျော်မွေ့နိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်များမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဒီရုံဆောင်ပုဒ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတစ်ခါလည်းသူကအရပျ, သို့သော်ဤနေရာတွင်သင်ကသဘာဝတရားခံစားရတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းလူ့သဘာနိုင်ပါတယ်မသာ။ ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောယောင်ဆောင်တောင်မှကျော်ကြားလူတို့နှင့်အတူ, ရှိသမျှဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့်ကမ္ဘာကျော်ကနေဧည့်သည်များရှိခဲ့ပါပြီ။ ခရီးသွားလာမှုအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်စွန့်စားအနုပညာဝိညာဉျကိုဝေမျှသူတွေကို။ ထိုအရပ်၌များစွာသောစိတ်ဝင်စားဖို့ပုံပြင်များဖြစ်ကြသည်, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အချက်ဖြစ်ပါသည်, ထို လူတွေနည်းပညာ ပို. ပို. အားကိုးနေကြသည်, သူတို့ရင်ဆိုင်ရ-to-မျက်နှာဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့ရှိခြင်း, အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်မရှိဘဲနှင့်ဤကဲ့သို့သောအရပ်မှလာမယ့်သဘာဝခံစားရတယ်တစ်ဆဲလ်ဖုန်းစရာမလိုဘဲသဘာဝဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့အတှေးအဖို့ဒါအနီးကပ်ခံရ ဆိုရှယ်မီဒီယာမရှိဘဲအရပ်မှဆက်သွယ်ရေး။
သဘာဝကျကျ, ငါသည်ဤအဆင့်တွင်ဖြတ်သန်းကြောင်းစောငျ့ရှောကျသူတို့အာရုံပတျဝနျးကငျြသဘောသဘာဝ, အနံ့နှင့်အသံအဘို့အဖွင့်ရန်စတင်ကြောင်းတွေ့ရှ။ ငါသည်ဤအရှိဆုံး reoccurring အခြေအနေထင် - လူတွေကဒီမှာမြို့အတွက်အစာရှောင်ခြင်းလူနေမှုနှင့်စမတ်နည်းပညာများငြီးငွေ့လာနှင့်နေ့စဉ်ဘဝလွတ်မြောက်ရန်ဖို့နေရာရှာပါ။ သူတို့ကိုဖြေလျော့ပေးခြင်းကိုတွေ့မြင်ရန်, အပြည့်အဝအားသွင်းထွက်ခွာ - ဤအချို့အမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိသောစိတ်ခံစားမှုမျှဝေသည်။
ငါသေးဒီအထူးအရပျ၌အနုပညာကိုဖန်တီးရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းသောသူမည်သည်များအတွက်အာကာသအလုပ်လုပ်တို့နှင့်လည်းတစ်အနုပညာစင်တာဤအရပ်ဌာနကိုလုပ်ငါ့စိတ်ကူးအောင်မြင်ပြီမဟုတ်။ ဒါကြောင့်ငါသည်ဤအနည်းငယ်သာရာအရပျ Utopia ကြီးထွားခြင်းနှင့်တူနိုငျကွောငျး, စိတ်ကူးကိုယုံကြည်သူအပေါငျးအသငျးမြား, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံမှထောက်ခံမှုအတွက်ဖွင့်ဖြစ်၏။
ကြီးမားတဲ့သမိုင်း, ဝိညာဉျတျောနှင့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတူနေရာတစ်နေရာ၏စိတ်ကူး။ ကျနော်တို့ယျကြောင့်ထိုသို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စိတ်ကူးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စိတ်ကူးကိုထိန်းသိမ်းဖို့စိတ်ကူး။
အကြောင်းပိုမို အနုပညာဗီလာ Orlova Chuka အဘိဓါန်
အတတ်ပညာ, အိပ်ရာနှင့်နံနက်စာ, တည်းခိုခန်း, အိုင်ဗင် Belchev, Ivelin Vlaykov, နဂါးငွေ့တန်း, သဘာဝ, သဘာဝဥယျာဉ်, အိမ်ဟောင်း, ပန်းချီဆရာ, startup | 22-12-2016 | rating:5/ 30